प्रधानमन्त्री र कांग्रेसबीच असन्तुष्टी » खबरहरुको एउटै केन्द्र
प्रधानमन्त्री र कांग्रेसबीच असन्तुष्टी
आईतवार, फाल्गुन १, २०७३ ०३:१९ मा प्रकाशित !
फागुन १, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री र सत्ता सहयात्री कांग्रेसबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ । सरकार गठनका वेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय निर्वाचनसम्म प्रचण्ड र त्यसपछि प्रदेश र संघको निर्वाचन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेको भन्दै कांग्रेस नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । कांग्रेस पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसमा सहमत छैनन् । स्थानीय निर्वाचन चैतमा गराउने योजनासहित प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त्यसमा पनि ढिलाइ गरेकोमा समेत कांग्रेस असन्तुष्ट छ ।
सत्ता गठबन्धनको अर्काे दल राप्रपा पनि प्रधानमन्त्रीसँग चिढिन थालेका छन् । आफूहरू सरकारमै रहे पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता सहयात्री दलको जस्तो व्यवहार नगरेको उसको गुनासो छ । संविधान संशोधन विधेयक ल्याउँदा आफूसँग सल्लाह नै नगरेको भन्दै राप्रपाले विपक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेका छन् ।
संविधान संशोधनका लागि मोर्चाले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । संशोधनविनै निर्वाचनको मिति घोषणा भए त्यही दिनबाट आन्दोलनमा जाने चेतावनी मोर्चाले दिँदै आएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार मात्रै सप्तरीमा सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे आन्दोलन घोषणा गरी अगाडि बढ्ने बताएका छन् । प्रतिपक्षी एमालेलगायत नौ दल प्रधानमन्त्रीसँग सरकार गठन भएदेखि नै असन्तुष्ट छन् । १४ मंसिरमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि विपक्षी थप चिढिएका छन् । एमालेले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गरी चुनावमा जान दबाब दिइरहेका छन् ।
चन्द्रमाको यो माटोमा कसको हक लाग्छ ?
सरकारले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा अघि सार्नुले गम्भीर आशंका उब्जिएको छ : पौडेल
गोरेले भने जस्तो सुन काण्डको सबै रहस्य खुल्ला ?अदालतमा एसएसपी श्याम खत्री को बयान सुरु,
तीन महिना भित्र राजमुकुट सार्वजनिक गर्ने सरकारको घोषणा
यक खेम कार्कि र गायिका पुर्णकला बिसीको गीत ”गैरी पयौ ताल ”(भिडियो
PREVIOUS POST Previous post: जनयुद्ध दिवस ओझेलमा
NEXT POST Next post: काभ्रे जिल्लाको पाँचखाल भ्यालीमा पौने २ अर्ब रुपैयाँ लागतको सिँचाइ आयोजना
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, फाल्गुन १, २०७३ ०३:१९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, फाल्गुन १, २०७३ ०३:१९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, फाल्गुन १, २०७३ ०३:१९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, फाल्गुन १, २०७३ ०३:१९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, फाल्गुन १, २०७३ ०३:१९